Iintyatyambo zoMtshato zika-Okthobha - Umtshato Utyatyambo
Iintyatyambo zoMtshato zika-Okthobha
Iintyatyambo eziwayo zihle.
Iintyatyambo zomtshato kumsitho ka-Okthobha zihlala zixhomekeka kwinto efumanekayo ngexesha lokukhula kokuwa. Uninzi lwabantu abatshatileyo bakhetha umhla womtshato ka-Okthobha ukuze basebenzise imihombiso yeentyatyambo zasekwindla kunye nemibala.
Izinketho zeentyatyambo zika-Okthobha
Xa kuziwa kwiintyatyambo zomtshato, awusenamda lixesha lokukhula kwindawo yakho yendawo. Izindlu zokugcina izityalo zihlala zineentlobo ezingaqhelekanga kunye neentyatyambo zasehlotyeni ziwela nasebusika, kwaye ngeendlela ezintsha zokuhambisa, phantse nayiphi na intyatyambo inokubhabha isuka kwindawo ekude ukuba ayifumaneki. Ewe kunjalo, kukho ubuchule kunye neengozi zokusebenzisa zombini iintyatyambo zika-Okthobha kunye nokukhetha ngaphandle kwexesha.
Ientyatyambo zomtshato eziwayo
Iintyatyambo zoMtshato oMfusa
Ixesha le-Okthobha leentyatyambo
Ngokuxhomekeka kwindawo yakho yelizwe, iintyatyambo zomtshato eziwa ngamaxesha athile ngo-Okthobha zinokubandakanya:
Ezi zimbalwa zeentyatyambo ezibukeka zintle ekwindla. Zilungele ukusetyenziswa kwii-bouquets, izinto eziphambili, kunye nolungiselelo lomsitho. Ingingqi, iintyatyambo zamaxesha athile zihlala zitshiphu kunokuthenga iintyatyambo ezikhula kwindawo eluhlaza okanye ukuthunyelwa kweentyatyambo. Banikezela ngokuqaqamba, okutsha kokuwa kumalungiselelo akho eentyatyambo xa usebenzisa iintyatyambo zamaxesha athile.
Izinketho zangaphandle kwexesha
Phantse nayiphi na intyatyambo iyafumaneka nangaliphi na ixesha enyakeni. Nangona kunjalo, okungaqhelekanga kokungafaniyo kunye nokuqaqamba kokuqhakaza, kokukhona kunzima kwaye kuyabiza kakhulu ukufumana. Ukongeza, ezinye iintlobo zeentyatyambo zinokubonakala zingahlali kwindawo yomtshato wasekwindla.
Okona kulungileyo kuzo zombini ezi ndlela, cinga ngokudibanisa iintyatyambo zonyaka ka-Okthobha kunye neentyatyambo ezingaphandle kwexesha ukuze unciphise iindleko kodwa ujonge ixesha lonyaka kunye nolutsha ngaphandle kokuncama iintyatyambo zakho ozithandayo.
Izitayile zika-Okthobha iintyatyambo zoMtshato
I-filler esetyenzisiweyo kunye nokuwa kweentyatyambo zomtshato inquma ukujonga ngokubanzi kumalungiselelo akho eentyatyambo. Nokuba kungenxa yesipha somtshato sika-Okthobha okanye indawo esembindini, kuya kufuneka ukhethe i-filler ebonisa isimbo sakho somtshato. Kungenxa yokuba unomtshato ngo-Okthobha oko akuthethi ukuba kuya kufuneka ujonge umtshato ofanelekileyo weHalloween okanye ubonise ubuninzi bekwindla. Yomibini imibala yeentyatyambo kunye nokuzaliswa kuya kuba negalelo kwisitayile sakho seentyatyambo sika-Okthobha.
Imibala yeentyatyambo ka-Okthobha
Kubaluleke kakhulu njengoluhlu lweentyatyambo ngumbala weentyatyambo okhetha ukuwusebenzisa kwizimbali zakho nakumalungiselelo ngo-Okthobha. Sebenzisa umbala wephalethi wakho wokuwa komtshato ukukukhokela kukhetho lwakho lombala weentyatyambo.
Khetha imibala yasekwindla etyebileyo, njenge-burgundy, i-marigold, kunye nephuzi ngenkangeleko yexesha lakho kwiintyatyambo zakho. Ukujonga ixesha elingaphantsi kwexesha elifanelekileyo ngo-Okthobha, cinga ukongeza kweminye imibala embalwa ukudibanisa imibala yasekwindla. Umzekelo, yongeza iiroses zophondo lwendlovu kwisipha sephuzi kunye neorenji. Umbala omfusa kunye nokhrim yenye indibaniselwano yombala ekufaneleyo ngokupheleleyo ukuwa, kugqitywe kuluhlaza oluncinci.
Ukuzaliswa kweentyatyambo zakho zomtshato kuya kubonakalisa ukuwa ngokubanzi kwiindwendwe zakho. Ukuthatha ixesha elininzi ngo-Okthobha iintyatyambo, yongeza amagqabi emephu, amathanga amancinci kunye nemithambo, kunye nemidiliya okanye amasebe kwizimbali zakho. IRafiya kunye nengca eyomileyo zezinye izinto ezizalisayo ezibonisa ixesha lokuwa.
Gwema ukujonga njengomtshato oqhelekileyo wokuwa ngokongeza ezinye izinto ezizalisayo, zonke ezifumaneka ngokuwa:
Umtya ka-Queen Anne
Amagqabi e-shrub eluhlaza
Amajikijolo, njengehypericum okanye iqabaka
Ukongeza ekusebenziseni i-filler yexesha elingaphantsi, unokuba ne-bouquets kunye neendawo eziphambili ezinentyatyambo yomtshato ka-Okthobha ngemibala yokuwa ngaphandle kokugcwalisa konke konke. Cinga ukuba neekristal ubuhlalu oxhonywe kwindawo ende ejikelezayo ukuze ujonge ubukhazikhazi kwimisitho yakho yokwamkela umtshato. Imicu yeeperile esongelwe kwimixokelelwane yomtshato neyomtshakazi yenye indlela yokongeza ubuhle kwientyatyambo zakho zika-Okthobha ukuba ufuna ukunqanda ithoni ye-rustic kwiintyatyambo zakho zomtshato.
Iintyatyambo zomtshato zika-Okthobha ozikhethileyo akufuneki zibekho ngexesha lonyaka. Ngaba iintyatyambo zakho ozithandayo zithunyelwe ngaphakathi okanye ukhethe iindidi ezikhoyo unyaka wonke kwaye usebenzise imibala yasekwindla ngenkangeleko yokuwa. I-filler kwi-bouquets yakho kunye ne-centerpieces, kunye nokukhethwa kombala wakho, kuya kugqiba uhlobo lweentyatyambo zakho. Nokuba uyayithanda inkangeleko yasekwindla okanye hayi, inyanga ka-Okthobha ikhula ngokukhetha iziqwenga zomtshato wakho.
Uqhawulo-Mtshato Nemali Iselfowuni Iikhokelo Neendlela Zokusebenza Ukubuyela Umva Camping Iimoto Izilayidi Amanzi Park And Water Slides
yintoni amadoda ayifunayo ngosuku lwe-valentines
ungawususa njani umhlwa kwintsimbi engenasici
Ngaba iposi iyasebenza ngomhla weKrisimesi
ukusuka kusapho lwethu ukuya kwisilogeni sakho